"နှစ်ချို့အရက်တွေလိုမျိုး ဒီမှာလဲ နှစ်ချို့ဖယောင်းတိုင် ဖြစ်နေပြီ သိရဲ့လား" တဲ့။ ၀ါကျင်ကျင်ဖြစ်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်က သူ့ကို မထွန်းတာ ကြာလို့ မကျေမနပ်နဲ့ ပြောနေတယ်။ သူ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးလိုက်ပါတယ်။ Read more »
Daw Aung San Suu Kyi The Lady Text Portrait #TheLady
Created by Moe Ye
အခန်းထဲမှာ အရှင်လတ်လတ် သေနေတာ
၀ှက်ထားဖို့နေရာ မတွေ့ခဲ့ဘူး။ Read more »
စစ်အေးတိုက်ပွဲရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲဟာ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာကနေ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ၁၀နှစ်နီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲဟာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာ အာဖဂန်အရပ်သားပေါင်း ၈သိန်းခွဲကနေ ၁၅သိန်းခွဲလောက် သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ အာဖဂန်နိုင်ငံအပြင်ဘက် ပါကစ္စတန်နဲ့ အီရန်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅ သန်းလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင် မိန်းကလေးတို့ မိသားစုလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ Read more »
This work by Moe Ye is licensed underaCreative Commons Attribution 3.0 Myanmar License.ဤဘလော့ရှိ ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရေးသားချက်များကို ကျွန်တော့်အမည်ဖော်ပြ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာများတွင် လွတ်လပ်စွာ ကူးယူမျှဝေနိုင်ပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အဖတ်အများဆုံး
ကလေးပန်းချီ ရောင်စုံအိမ်လေးနဲ့ စမ်းချောင်းလေးပုံ ကိုယ် ဆွဲခဲ့တယ်။ တောင်ထိပ်အနောက်ဘက်က ၀င်လုဆဲနေမင်းကြီးနဲ့ တိမ်ဖြူဖြူတွေရယ် ... ငှက်ကလေးတွေရယ်ကလဲ ...
ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုမြို့ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲက မရှိတော့တဲ့ကျားက အတွဲချောင်းရတာ ပျင်းလာလို့ ၀ါးခနဲသန်းတယ် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တတ်ခဲ့တဲ့ကျားနဲ့ သူနဲ့ ဘာတော်သလဲ အမျိုးစပ်ကြည့်ေ...
ရုန်းထွက်မရ ဒဏ္ဍာရီ စွဲလန်းခဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ ဖြစ်ပျက်ပုံ ဘယ်လိုဆန်းသလဲ ငါ မမေ့ခဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ရုတ်တရက် ကျီးပြိုသလို ...
ဟေ့ ... ဟေ့ ကြည့်လိုက်စမ်း စစ်ကြီးပြီးသွားတော့ သက်တံရောင်မှာ အနိဌာရုံတွေ မရှိတော့ဘူး ကြယ်လေးတွေ အဖြူရောင်တောက်သွားပြီ စစ်ကြီးပြီးသွာ...
၁၀ ပေပတ်လည် ကျယ်တယ်။ ဆောင်းတွင်းဘက်နေ့ခင်းတွေမှာ နေထိုးတတ်ပြီးေ...
ဆရာ့စာအုပ်စင် ကိုးတန်းရောက်တော့ ဆရာ့ကျုရှင်မှာ ကျွန်တော်တတ်တယ်။ ကိုးတန်းအင်္ဂလိပ်စာ စာအုပ်ထဲမှာ How To Read Short Stories ဆိုတဲ့ ဖတ်စာလေးတစ်ပုဒ်ပါတယ်။ ဒီသင်...
အခန်း မှောင်လို့ မည်းလို့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညဉ့်နက်ထဲ မမြင်ရတဲ့ စကားသံတွေ ကြားနေရတယ် ဟောဒီလို လေးဘက်လေးတန် ကာရံထားတဲ့ နံရံတွေကြားမှ...
Daw Aung San Suu Kyi The Lady Text Portrait
ညရုပ်တု တဇွတ်ထိုးဆန်မှုနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆွဲညှိလို့မရတဲ့ မိုးသားထဲ ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်း ရိုးရာကဲလွန်းပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် တိမ်တွေ တရွေ့ရွေ့မျော...
သူနှင့်ကျမ အမှတ်တရ နေ့လေးတွေတိုင်းတွင် နှစ်ယောက်အတူ ရှိမနေသည်က များလှသည်။ ယခုလည်း မကြာခင် အချိန်ပိုင်းမှာ သူ့မွေးနေ့ကို ရောက်တော့မည်၊ သူနှင့်ကျမက တယောက်တ...
ဇွန် ၇ ရက်နေ့၂ နာရီ ဂျွှန်အက်ဖ်ကနေဒီလေဆိပ်ရောက်တော့ ကသေးပစိဖိတ်လေယာဉ်က ရောက်နှင့်နေပြီ။ တခြားလေယာဉ်က လူတွေသာ ထွက်လာပေမဲ့ ကသေးပစိဖိတ် လေယာဉ်မယ်တွေ ထွက်လာတာ...
ကဗျာ့အင်အားကြီးဆရာ/ဆရာမများအနေဖြင့် တစ်ဦးလက်သည်းနှင့်တစ်ဦး မဆက်ဆံမီ အမျိုးသားရေးမှအစ ငယ်ကျိုးငယ်နှာကဗျာစာအုပ်များ မထွက်ပေါ်မီ စက်သေနတ်ထဲ SD card အသစ်ကလေးထ...
ကဗျာတို (၅) ပုဒ်
ငါလည်း ညစ်ညစ်နဲ့ ငရုတ်ဆီဗူးကိုညှစ်
ပြီး စားပွဲပေါ် သူ့နာမည်ရေးခဲ့တယ်
“ခင်ဗျား ဘာတွေ တွေးနေလဲ” လို့ ဆရာဝန်က မေးတော့ ကျွန်တော့်မှာ လန့်သွားတယ် အဲဒီလိုမျိုး တယောက်ယောက်က ဘာတွေ တွေးနေလဲလို့ မေးလိုက်ရင် ကျွန်တော့်မှာ ဘာတွေတွေးနေ...
Phoenix တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဟာ သူ့အတန်းသားတွေကို အိမ်စာတစ်ပုဒ်ပေးပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ထူးခြားတဲ့အချက်က ဒီအိမ်စာကို ၂ ယောက်တစ်တွဲလုပ်...
အမျိုးအမည်မသိ ကျိုင်းကောင်များနှယ် အချိန်ယူစိုက်ပျိုးထားတဲ့ သီးနှံခင်းထဲ အုပ်လိုက် မည်းမည်းလှုပ်လှုပ် ထိုးဆင်း သုတ်ကြတယ် မပြယ်သော မေတ္တာတရားသာ ကယ်မ ရာ နည်...
အသက် ၃၀ ပြည့်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ဆာယိုခိုမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူမက ဘွဲ့လွန်အတွက် ကြိုးစားရင်း ကျူတာပြန်လုပ်နေပြီ၊ ဒါပေမဲ့ သမီးလေးကို မွေးဖို့...
နတ္ထိ | ရှိခြင်း မရှိခြင်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်
ကိုးကွယ်ဖို့တော့ မရည်ရွယ်ပေမယ့် လပြည့်ဝန်းပုံရိပ် ကိုးရိပ်အောက်မှာ ကဗျာ+ပါဠိဘာသာပြန် ကိုးပုဒ်ကို ခံစားမိတဲ့အခါ ကိုးစားဖို့ရော ခိုကိုးဖို့အတွက်ပါ မျှော်လင့်...
တစ်ခါတုန်းကကျားတစ်ကောင်မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီးမြန်မာပြည်နယ်စပ်ကိုရောက်လာသတဲ့။ဖြစ်ချင်တော့ ကျားလောကမှာသတင်းတစ်ခုထွက်နေ တယ်။
သမီးလေးကို Play School အချိန်ပိုင်းပို့တော့မယ်။
အိမ်မှာက သူ့အပြင် ကလေးမရှိ၊ အလိုလိုက်တဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ပဲ
ဆိုတော့ သူက ဗိုလ်ကျပြီး ဆိုးချင်တယ်။ သူများအရုပ်ဆို...
အသစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့ရဲ့ ကျောက်ခဲပုံတွေကြား လှဲအိပ်ကြရတဲ့အခါ၊ (မြေကြီးရဲ့) မို့မောက်ရုန်းကြွမှုမှာ ရေအောက်ကသစ်တောတွေ ယိမ်းခါကြတဲ့အခါ၊
တိုင်းစွန်ပြည်နားမှာ ထမင်းရှာစားနေတဲ့ ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် မုန့်ဆမ်း မမြင်ဖူးတာ ဆယ်...
နှင်းခါးမိုး ပူနွေးတယ် မွှေးပျံ့တယ် ရင်ကိုခုန်စေတယ်။ မနက်စောစောကို မင်္ဂလာပါလို့မပြောမီ ညကမှပွင့်တဲ့သစ်ခွအိုးကလေးကို ငေးရင်း တစိမ့်စိမ့်သောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် ကြိမ်စ...
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်ခဲ့တာဗျ။ သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုအတတ်ပညာကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ကြည့်တယ်။ ...
မိုး ရဲCreate Your Badge
ဒဏ္ဍာရီ လျှိဝှက်ဆန်းကြယ် နေရာများ
Follow Moe Ye's board လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေ (Wanted Books) on Pinterest.
ကမ္ဘာမြေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ငါ ... ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ? (ဆရာအော်ပီကျယ်)
Follow Moe Ye's board ကမ္ဘာမြေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ငါ ... ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ??? on Pinterest.